May 1, 2021 - Cele Fans
[ June 19, 2021 ] စံပြဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုအောင်မိုး	Uncategorized
[ June 19, 2021 ] အိမ်ရှင်မတွေ သတိထားသင်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ငွေဆုမဲ/ဆုကြေး	Knowledge
[ June 19, 2021 ] ကမ္ဘာကျော်သူခိုး မြန်မာမှာပဲရှိတယ်	Local News
[ June 18, 2021 ] မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာကို FAO ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ ပယ်ချ	International News
[ June 17, 2021 ] မြန်မာအတွက်ဒေါ်လာသုံးသိန်းမြောက်ကိုရီးယားထောက်ပံ့	International News
မြန်မာပြည်မှာ အလကားရတဲ့ အရွက်ကို အမေရိကန်မှာ (၁၃) ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းနေလို့ ရှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on မြန်မာပြည်မှာ အလကားရတဲ့ အရွက်ကို အမေရိကန်မှာ (၁၃) ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းနေလို့ ရှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ
အရမ္းကို အံ့ဩမိ ပါသည္.. ဖတ္ၾကည့္ၾကပါဦး.. က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာေပါမ်ားလွတဲ့ သရက္႐ြက္ (Mango Leave) ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ၂ ေအာင္စ ကို ၁၃ ေဒၚလာ (13$) နဲ႔ေရာင္းေနတာေတြ႕ရေတာ့ ဘာေတြေကာင္းလဲဆို google ေခါက္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္ သူမ်ားေတြေရာင္းေနတာ ကုန္ေခ်ာအဆင့္ေတာင္မဟုတ္ပါဖူးေနာ္.. သူမ်ားေရာင္းတာထိုင္ဝယ္စားေနရမယ့္ ေခတ္လဲ မဟုတ္ေတာ့ပါဖူး. သရက္သီးအ႐ြက္ဟာ သရက္သီးထက္ အဟာရပိုမ်ားေနပါတယ္.. ဗီတာမင္ ေအ ဘီ စီနဲ႔ antioxidant ေတြႂကြယ္ဝပါတယ္.. […]
တရုတ်၊ရုရှားအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသဘောတူချက်ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on တရုတ်၊ရုရှားအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသဘောတူချက်ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
မြန်မာ့အရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ထုတ်​ပြန်ချက်တရုတ်၊ရုရှားအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသဘောတူချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့၊ အာဆီယံ ရဲ့ မြန်မာ့အရေးထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိသည့်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေ ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကထပ်မံ တောင်းဆို၊ တရုတ်နှင့် ရုရှားအပါအဝင် လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အားလုံးကသဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကြေညာချက်တွင်အထက်ပါအတိုင်းပါရှိခဲ့သည်။ မြန်မာအရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီတံခါးပိတ်အစည်းအဝေးကိုယမန်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Source/VOA and VOA Burmese ——————— ျမန္မာ့အေရးအတြက္ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ထုတ္​ျပန္ခ်က္တ႐ုတ္၊႐ုရွားအပါအဝင္အဖြဲ႕ဝင္အားလုံးသေဘာတူခ်က္ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့၊ အာဆီယံ ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရးထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိသည့္အတိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ဖို႔ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကထပ္မံ ေတာင္းဆို၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားအပါအဝင္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ […]
လူတွေဒုက္ခရောက်နေချိန် ဖြစ်တည်မှုအပေါ်အသုံးချ အခွင့်အရေးယူတဲ့ ဘုန်းကြီးအချို့အကြောင်း (ကိုယ်တွေ့)
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on လူတွေဒုက္ခရောက်နေချိန် ဖြစ်တည်မှုအပေါ်အသုံးချ အခွင့်အရေးယူတဲ့ ဘုန်းကြီးအချို့အကြောင်း (ကိုယ်တွေ့)
ဒီနေ့ မေလ ၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာပလာဇာ AYA ATM မှာ ငွေထုတ်ဖို့တန်းစီနေရင်း ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ကျနော်တို့ထုတ်ပြီးချိန် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်မှာ ဘုန်းကြီးဆယ်ပါးနဲ့ လူလတ်ပိုင်းတစ်ဦး ရောက်လာကြပြီး ကြားဖြတ်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ အဲ့မှာ တန်းစီနေသူတွေကို ဗော်လန်တီယာဝင်စီမံပေးသူ၊ တန်းစီနေသူတွေနဲ့ စကားအခြေအတင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာလို့ကြားဖြတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ ဆွမ်းစားချိန်နီးလို့၊ အရင်ရက်တွေကလည်း ဒီလိုပဲ ကြားဖြတ်ထုတ်နေကြမို့၊ ဟိုလူကြီးနဲ့ ပြောပြီးသလို ဒီလူကြီးနဲ့ ပြောပြီးသလိုတွေ ဖြဲတာပါ။ မြန်မာပလာဇာရဲ့ […]
ဘယ်နေရာကနေနေ ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်၊ တော်လှန်ရေးသမားရဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုတာထက် ကိုယ်ကလည်း တထောင့်တနေရာကနေ တော်လှန်ရေးမှာ ပါရမှာပါ
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on ဘယ်နေရာကနေနေ ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်၊ တော်လှန်ရေးသမားရဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုတာထက် ကိုယ်ကလည်း တထောင့်တနေရာကနေ တော်လှန်ရေးမှာ ပါရမှာပါ
ဘယျနရောကနနေေ ထောကျပံ့ပေးသှားမယျ၊ တောျလှနျရေးသမားရဲ့ မိနျးမတဈယောကျဆိုတာထကျ ကိုယျကလညျး တထောင့ျတနရောကနေ တောျလှနျရေးမှာ ပါရမှာပါ။ ပုံမှနျဆို သူနဲ့ တကျညီလကျညီပါခငြျတာ ဒါပမေဲ့ သမီးငယျလေးရှိသေးတော့၊ သမီးလေးကလညျး နှဈနှဈတောငျမပွည့ျသေးဘူးလေ”“သမီးလေးကလညျး ဖဖေဘေယျသှားတုနျးလို့ မေးရငျတို့အရေး တို့အရေးနဲ့ ပွောနတော၊ ကလေးက နှဈနှဈတောငျ မပွည့ျသေးဘဲနဲ့လေ။ သူ့အဖနေဲ့ ဖုနျးပွောရတိုငျး၊ဖုနျးကို ဖကျပွီး အာဘှားပေးတာတှေ လုပျတယျ၊တောျလှနျရေးကတော့ နိုငျငံသားတဈယောကျအနနေဲ့ တတကျတအား ပါသှားရမှာ။ ဒါကွီးပွီးဆုံးသှားအောငျအထိ တိုကျပှဲဝငျသှားရမှာပါ””အရေးတောျပုံကွီးရှိနသေရှေ့ တဇောဆနျးတှေ အသဈအသဈပေါျနမေယျဆိုတာ ပွောခငြျတယျ […]
ဗိုလ်ချုပ် အသက် ၄ နှစ်သား အရွယ်က အဖြစ်အပျက်ကလေး တစ်ရပ်
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on ဗိုလ်ချုပ် အသက် ၄ နှစ်သား အရွယ်က အဖြစ်အပျက်ကလေး တစ်ရပ်
တစ်နေ့တွင် တောမှ စပါးဝယ်သူများရောက်လာ၍ မိခင်က “ကဲ… မင်းတို့ လိုချင်ရင်လည်း ယူသွားကြတာပေါ့။ ငါဝယ်တုန်းက (၆၀) စျေး ဝယ်ထားတာပဲ။ မင်းတို့လိုချင် (၅၀) စျေးထားပေါ့” ဟုပြောဆိုနေခိုက် အိမ်လှေကားနားတွင် ကစားနေသော အောင်ဆန်းလေးက မျက်စောင်းထိုး၍ “အစ်မ…ခင်ဗျား မဟုတ်တာတွေ ပြောရော့မယ်။ ဒီစပါး (၅၀) စျေးနဲ့ ဝယ်ယူထားတာဗျ။ ကျုပ်သိတယ်။ ဟုတ်တာပြောမှ ဥစ္စာပေါတယ်။ လိမ်ပြောတာ မကောင်းဘူး” ဟု ဝင်ရောက်ပြောလိုက် သဖြင့် […]
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေယာက်္ားဆိုးနဲ႔ ေတြ႕ႏိုင္တဲ႔ လကၡဏာ .
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေယာက်္ားဆိုးနဲ႔ ေတြ႕ႏိုင္တဲ႔ လကၡဏာ .
မိန္းမအေပၚ သစၥာမရွိသူ၊ ႐ိုက္ႏွက္သူ၊ ေငြအသုံးၾကမ္းသူ စသည္ျဖင့္ မိန္းမျဖစ္သူကို စိတ္ဆင္းရဲေအာင္လုပ္ေသာ ေယာက်ၤားေတြရွိပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြမွာလည္း သူ႔မွာကြၽန္မမွ မရွိရင္ မျဖစ္ဘူး။ သူက လူေတာ္ပါ လို႔ပတ္ဝန္းက်င္က အျမင္ကို ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အျမင္မွန္ကို မရခ်ိန္အထိ ပတ္ဝန္းက်င္က ဘယ္လိုပဲ နားခ် နားေထာင္မွာမဟုတ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခ်စ္ေၾကာင့္ပါ။ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ေယာက်ၤား ဆိုးနဲ႔ေတြ႕ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ လကၡဏာဟာ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၁. လက္သန္းေအာက္ကေန လက္ညႇိဳးအထိရွိေသာလမ္းေၾကာင္း ပထမဆုံး […]
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on (၂၆)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ်
(၂၆)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် သိန်းငါးထောင်ဆု ဗ ၂၂၉၈၆၆ သိန်းတစ်ထောင်ဆု ဖ ၄၃၆၅ဝ၇ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု ကဆ ၅၈၁၆၉ ဒ ၈ဝ၉၂၂ ဝ ၈၃၁၃၈ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၂)သိန်းဆု စျ ၆၂၇၆ ဒ ၂၂၉၁ ကဃ ၆၉၉၈ ဝေဝေဆာဆာ(၁)သိန်းဆု သ ၁၁၉ ကဆ ၈၅၁
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on ကမ္ဘာကျော်လက္ခဏာဆရာကြီး ကိုင်ရို ဟောကိန်းနဲ့ အနာဂတ်မြန်မာပြည်ကြီး၏ အလွန်းအားရဖွယ်ကောင်းသော အချက်များ
ကမ္ဘာကျော် လက္ခဏာဆရာ ဖြစ်သော ကိုင်ရိုသည် ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့် အရာများကို ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့ရာ မှန်ကန်သဖြင့် အလွန်မှပင် ထင်ရှားကျော်ကြားလေသည်။ တစ်နေ့တွင် မစ္စတာကိုင်ရိုထံသို့ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ရောက်ရှိလာလေသည်။ ကိုင်ရိုမှ ခရီးဦးကြိုဆို နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီး သံအမတ်ကြီးနှင့် စကားစမည်ပြောလေသည် ကိုင်ရိုသည်ကား ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် တော်တော်များများနှင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာများကို ဟောကိန်းထုတ်ထားရာ မှန်ကန်သဖြင့် နိူင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ဝန်ကြီးများ၊သံအမတ်များ ဖြင့် သိကျွမ်းလေသည် သံအမတ်ကြီးလာသောအချိန်သည်ကား ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသော အချိန်ဖြစ်လေသည်။ သံအမတ်က […]
ရှာရတဲ့ပိုက်ဆံတွေအကုန်လုံးကို မိခင်ကိုပို့ပေးပြီး ရုံးခန်းထဲမှာထမင်းခိုးချက်စားခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးရဲ့အဖြစ်
May 1, 2021 Cele Fans Comments Off on ရှာရတဲ့ပိုက်ဆံတွေအကုန်လုံးကို မိခင်ကိုပို့ပေးပြီး ရုံးခန်းထဲမှာထမင်းခိုးချက်စားခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးရဲ့အဖြစ်
တစ်ချို့သောယောကျာၤလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့မိဘတွေကို အတော်လေးချစ်မြတ်နိုးကြပြီး ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲ ကျေးဇူးဆပ်ချင်တတ်ကြပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း Azri Walter အမည်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဟာ ပိုက်ဆံချွေတာနိုင်ဖို့ရုံခန်းထဲထမင်းခိုးချက်နေခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်လေးရဲ့ လူတိုင်းကိုရင်ထဲထိမိစေမဲ့အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်လည်ဝေမျှခဲ့ပါတယ် ။ Azri ရဲ့ပြောပြချက်အရ ” ကျွန်တော်ရုံးခန်းရှိရာ အပေါ်ထပ်သို့တက်သွားပြီး တံခါးဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ မီးတွေကလင်းနေတယ် ၊ ပတ်ပတ်လည်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မှ စားပွဲခုံအောက်လေးမှာ အရိပ်လေးရွှေ့နေတာကိုတွေ့ခဲ့လို့ ကြက်သီးတွေထသွားတယ် ၊ ပြီးတော့ […]
စံပြဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုအောင်မိုး
မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာကို FAO ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ ပယ်ချ